I-China Z-LION ingxenye yomcibisholo ophindwe kabili we-trapezoid ukhonkolo wokugaya izicathulo abakhiqizi nabahlinzeki |Idayimane ye-ZL
Ingxenye yemicibisholo emibiliizicathulo zokugaya ukhonkoloamathuluzi okugaya idayimane e-trapezoid ajwayelekile okulungiswa kwendawo engaphansi kukakhonkolo.Njengawo wonke amapuleti okugaya e-trapezoid, ithuluzi lilungele ukususa ama-coatings amancane, ukulinganisa nokugaya ukhonkolo noma isisekelo se-cement terrazzo phansi.
Izicathulo zokugaya ukhonkolo zesigaba semicibisholo ekabili ziza namasegimenti angu-2 asesimweni somcibisholo onepherimitha enkudlwana ukuze kususwe okunamathelayo kahle kakhulu futhi kusike kube ikhonkrithi kakhudlwana.
Izicathulo zokugaya ukhonkolo zengxenye yemicibisholo ekabili ziza ne-trapezoid base plate, zingafakwa emshinini obanzi wokugaya waphansi ngezimbobo ezi-3 ku-base plate.Izimbobo ezi-3 zingacutshungulwa i-M6 ukuze zilingane izigayi zaphansi zase-US naseYurophu noma imigodi engenalutho engu-D9mm ukuze ilingane nezigayi zaphansi zaseShayina.
Izicathulo zokugaya ukhonkolo zesigaba somcibisholo okabili zitholakala ku-super soft, soft extra, soft, medium, hard, extra hard, super hard bond.Amagrits atholakalayo ngu-6#, 16#, 30#, 50#, 70#, 100#, 120#, 200#, 400#.
Upende onekhodi enombala kumathuluzi okuhlonza kalula izinombolo zegrit noma ubulukhuni bebhondi.
I-Z-LION imicibisholo ephindwe kabili ye-trapezoid izicathulo zokugaya ukhonkolo zijwayelekileamathuluzi okugaya idayimane e-trapezoidukuze kulungiswe indawo ephansi kakhonkolo.Izici ezikhethekile zaleli thuluzi lokugaya zimi kanje:
Amasegimenti omumo womcibisholo anepherimitha emikhulu ukuze asebenze kanzima.
Ingxenye iyinhlanganisela yamadayimane ebanga lomkhakha ahloliwe kanye nezimpushana zensimbi, inekhono elihle lokusika nokuphila okuhlala isikhathi eside.
Amasegimenti ashiselwe ngokomsebenzi ukuze kuthuthukiswe impilo ende yethuluzi.
Ukuma kwezingxenye kungashintshwa kube unxande, nxazonke, ibhokisi lomngcwabo, i-rhombus njll.
Umumo ojwayelekile we-trapezoid kulula ukufakwa kuma-adaptha azibuthe okushintsha ngokushesha okwenza ithuluzi likwazi ukusetshenziswa kwezinye izigayi zaphansi ezidumile njenge-HTC, i-Husqvarna, i-Lavina, i-Scanmaskin, njll. futhi.
Isetshenziselwa kakhulu ukulungiswa kwendawo yaphansi nokubuyisela.Ilungele ukulinganisa indawo kanye nokugaya kokuqala kukakhonkolo kanye nephansi le-terrazzo.Ama-grits ama-coarse angasetshenziselwa nokukhishwa kwe-coating.
Okwedlule: I-Z-LION ingxenye ye-rhombus ephindwe kabili ye-trapezoid amathuluzi okugaya ukhonkolo
Olandelayo: I-Z-LION 16KP ye-resin puck yedayimane yokupholisha ukhonkolo nephansi lemabula
I-Z-LION yebhondi yensimbi enelungelo lobunikazi I-Trapezoid diamond gr...
I-Z-LION 5 Ingxenye yomcibisholo engu-3inch yokugaya idayimane p...
I-Z-LION Enelungelo lobunikazi bomklamo wensimbi yebhondi 10 ingxenye di...
Ingxenye yomcibisholo yokugaya idayimane izicathulo ze-Werkma...